The Okwu Mmalite nke Shock Sub Drilling
site ha na 19-03-27
The ujo sub-egwu na-mepụtara na-anọrọ na malite ịgba eriri si axial deflections kere na bit site mkpọpu ala arụmọrụ na mgbe chebe bit si oké etinye na site egwu arụmọrụ. The ngwá ọrụ ga banye ujo ibu gburugburu malite ịgba eriri na malite ịgba bit. Ọ na-agụnye a h ...
Hydraulic egbutusị-kasị enwe Mmeri ngwaọrụ on ahịa
Dị ka a na-niile mara na, na n'ibu esịtidem cutter na-bụ-eji maka mbepụ nke akụkụ ụfọdụ n'elu downhole rapaara anwụrụ, dị ka mmepụta technology eriri, malite ịgba kọlụm na na. Dị ka nke ọma, ma ọ bụrụ na e kuchiri ekuchi na-adọ ọnwụ nke eji ehi ura bag-egwe ọka casing nke casing ewu, na ...
Pụtara ìhè ọdịiche nke Cordless u
Otu n'ime ndị kasị ahụkarị nzube nke u ndidi ke metalworking, woodworking, na-emepe emepe na ndị N'onwe aga-eme. Ị ga-ahụ u mere karịsịa maka ojiji na nkà mmụta ọgwụ, ohere ngagharị na ọbụna diamond Ngwuputa. Ị ga-ahụ nnukwu u na obere u na a fọrọ infinites ...
World Oil Ịnụrụ
World Oil Ịnụrụ Isi (13 November 2015) * Biko mara na ndị a Isi si ọhụrụ Oil Market Report, nke a tọhapụrụ na zuru ka debanyere aha naanị - dị ka usoro a kwa ọnwa. Non debanyere aha na-free ohere ọhụrụ Isi na usoro a, Otú ọ dị ...
Energy malite ịgba ngwaọrụ
Ha na-emekarị ejikwara site aka ma ọ bụ site na electric ike. Ọ bụ omume na-na-na-eji nke a igwe dị ka a sikruuokwomoto. Ị na-nnọọ idozi a sikruuokwomoto n'ọnụ a igwe iji ya dị ka a sikruuokwomoto. Egwu igwe dị na iche iche ụdị dabeere na n'elu ya mkpa. The dị iche iche nke ...
Reverse mgbasa (RC) egwu na-eji a sọrọ-walled malite ịgba anwụrụ (mkpanaka) na a siri ike malite ịgba bit na-emepụta a onu a guzobere na-anapụta oké nkume ibe (cuttings) na n'elu maka a ụdi analysis. Egwu usoro bụ a pneumatic reciprocating pistin (hama) ụgbọala a tungsten-ígwè d ...
Ala reamers na-arụrụ ọrụ na-agwụ ike arụmọrụ maka mmanụ & gas ụlọ ọrụ. Isi ọrụ nke ala reamers bee ụwa formations ka enlarge borehole na-achọsi ike size n'oge ọma na-egwu ala na ime, nke nwere ike ịbụ onye mbụ size nke malite ịgba bit na ihe banyere ebe malite ịgba bit w ...
Downhole Mbat Motors
Downhole Mbat Motors E nwere ihe abụọ bụ isi ụdị downhole Motors kwadoro site na apịtị eruba; 1) The tobaim, nke bụ isi a centrifugal ma ọ bụ axial mgbapụta na 2) The mma Ndahie apịtị moto (PDM). Ụkpụrụ nke ime ihe na-egosi na ọgụgụ na imewe nke ngwá ọrụ na-kpam kpam dị iche iche. ...
Fishing bompa Sub N'ihi Drilling ite, Two-Way Shock Sub, Ujo Sub Drilling Ngwá Ọrụ, Drilling Fishing Ngwá Ọrụ Die olu akwa, Reverse Circulation Junk Basket,